Saadaasha Roob-di’idda Soomaaliya 13-11-2017
Tobankii maalmood oo dambe waxaa ka jirey roobab aad iyo aad u culus gudaha qaar ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya oo sababay fatahaad iyo barkac ka dhacay gudaha dhawr meelood. Gobolka Bay waxaa ka da’ay xaddiyada roobabkii ugu cuslaa oo goobaha qaar wuxuu dhawr maalmood sare ugu kacay roobabkii celceliska sanadalaha ahaa. Xaaladaha roob-di’idda waxaa la filayaa in aya raadaan toddobaadka soo socda oo ka muuqata saadaasha roob-di’idda 3-da maalmood iyo halka toddobaad sida mid mid ahaan ku cad Khariiradadda 1 iyo Khariiradda 2. Halkas waxaa ka jiraya halis fatahaadeed ah dhexdhexaad ilaa mid sare gaar ahaan bartamaha iyo inta hoose oo ay maraan Webiyada Juba iyo Shabeelle meelahaas oo hadda heerarka webiyada ay tahay mid aad u sarreysa. Isticmaaleyaaasha waxaa lagu wargelinaya in waxaani ay yihiin saadaal oo ay dhici karto in mararka qaar ay wax iska weydaartaan saadaasha iyo xaqiiqda qadarka roobka la helay. Saadaasha, heerarka webiga la arkay iyo qadarka roobka-da’a waxaa loo cusboonaynsiiyaa si maalinle ah waxaana laga helikaraa gudaha xiriirkaan: http://systems.faoso.net/frrims/ .
Saadaasha Roob-di’idda Soomaaliya 25-10-2017
Saadaasha Roob-di’dda la isu geeyey saddexda maalmood (Khariidadda 1) waxay tilmaamaysaa in gobollada Koonfureed ee xuduudka la leh Kenya meelo ka tagtagsan oo ku yaal Soomaaliland ay heli doonaan roobab fudfudud. Waxaa sidoo kale saddex beri gudahooda laga filayaa roobab fudfudud qaybo ka tirsan gobolka Bari ee xagga Waqooyi. Saadaasha hal toddobaad (Khariidadda 2) waxay sheegaysaa roobab kordhaya gudaha Soomaaliland iyo qaybaha sare dooxooyinka Juba iyo Shabeelle ee gudaha buuraleyda saree e Itoobiya. Heerarka webiga dhulka bartamaha Shabeellehadda kor ayey u kacsan yihiin oo waxaa ka jira halis fatahaad oo dhexdhexaad ah gudaha Jowhar iyo deegaannada lagu xusay saadaasha roob-di’idda.
Roobab fudud ilaa kuwo dhexdhexaad ayaa sii socday guud ahaan dalka iyo meelo badan oo gobollada koonfureed ah oo laga diiwaaniye roobab ilaa xad fiican. Roobab culculus ayaa la saadaalinayaa toddobaadka soo socda dhexdhiisa (Khariidadda 2) inay ka da’aan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Buuraleyda sare ee Itoobiya ayaa sidoo kale la filayaa in ay hesho roobab culculus inta lagu jiro toddobaadka la saadaalinayo. Iyadoo la tixgelinayo saadaasha roob-di’idda, heerarka webiga ayaa la filayaa in ay kor u kacaan oo ay ku sababaan ilaa dhammaadka toddobaadka halis fatahaado dhexdhexaad ilaa kuwo sare gudaha deegaannada dhexe iyo kuwa hoose ee Webiga Shabeelle.
Saadaasha Roob-di’dda la isu geeyey saddexda maalmood waxay tilmaamaysaa in Gobollada Dhexe iyo kuwa Koofureed ee dalka ay roobabku ay u socon doonaan kuwo fudud ilaa dhexdhexaad sidaas oo kale buuraleyda sare ee Itoobiya waxaana la filayaa in uu kordho xaddigi iyo baaxad ahaan inta toddobaadku socdo, sida lagu muujiyey. Qaybaha Galbeed ee Soomaaliland iyo qaybaha koonfureed ee Soomaaliya oo ku jiraan Jubada Hoose, Shabeelaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe waa ay qalalnaan doonaan inta lagu jiro muddada la saadaalinayo. Heerarka webiga dhulka bartamaha Shabeelle hadda kor ayey u kacsan yihiin oo waxaa ka jira halis xoogan oo fatahaad gudaha Jowhar iyo deegaannadeeda.